ဇူလိုင်လ 2017 |3၏စာမျက်နှာ 89 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 3)
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ Editor ကို
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာကုမ္ပဏီ: မင်္ဂလာဆောင်တည်နေရာ: မန်ဟက်တန်နယူးယော့အမေရိကန်မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ဦးပုံနှိပ်အဆင်သင့်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာများအတွက်လိုက်ရှာ။ သငျသညျရှိစေခြင်းငှါအဘယ်အလုပ်ကိုမျှပူးတွဲပေးပါ။ အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အဖြစ်။ Photoshop မှာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတစ်ကြိမ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ယောဘသည်အမျိုးအစား: စာချုပ်လစာ: $ 300.00 / နေ့ယောဘသည်တည်နေရာ: မန်ဟက်တန် ...
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - Pittsburgh
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - Pittsburgh ကုမ္ပဏီ: Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံ, Inc တည်နေရာ: Pittsburgh PA ဆိုပြီးအမေရိကန်မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, Inc $ 500 တစ်နေ့ - စာချုပ် - Pittsburgh, PA ဆိုပြီးဧရိယာသူကိုဖန်တီးမှုတစ်ဦးချင်းစီမှအလွတ်တန်းရာထူးတစ်ခုကိုရွေးပါငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းသည် ဓာတ်ပုံအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ကြပြီး client ကို-oriented ရာထူးအတွက်ခံစားခဲ့ရသညျ။ ဓာတ်ပုံဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးအသင်းကို Join ။ ကျနော်တို့ထံအပ်နှံကြသည် ...
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - Akron, OH
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - Akron, OH ကုမ္ပဏီ: Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံ, Inc တည်နေရာ: Akron OH အမေရိကန်မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, Inc $ 500 တစ်နေ့ - စာချုပ် - Akron, OH ဖန်တီးမှုတစ်ဦးချင်းစီမှအလွတ်တန်းရာထူးတစ်ခုကိုရွေးပါငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းသည် သူကိုဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်. အသည်းအသန်ဖြစ်ကြပြီး client ကို-oriented ရာထူးအတွက်ခံစားခဲ့ရသညျ။ ဓာတ်ပုံဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးအသင်းကို Join ။ ကျနော်တို့ထံအပ်နှံကြသည် ...
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - ဘော့စတွန်, MA
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - ဘော့စတွန်, MA ကုမ္ပဏီ: Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံ, Inc တည်နေရာ: ဘော်စတွန် MA အမေရိကန်မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, Inc $ 500 တစ်နေ့ - စာချုပ် - ဘော့စတွန်, MA ဖန်တီးမှုတစ်ဦးချင်းစီမှအလွတ်တန်းရာထူးတစ်ခုကိုရွေးပါငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းသည် သူကိုဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်. အသည်းအသန်ဖြစ်ကြပြီး client ကို-oriented ရာထူးအတွက်ခံစားခဲ့ရသညျ။ ဓာတ်ပုံဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးအသင်းကို Join ။ ကျနော်တို့ထံအပ်နှံကြသည် ...
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - အီလီနွိုက်
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ - အီလီနွိုက်ကုမ္ပဏီ: Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံ, Inc တည်နေရာ: ချီကာဂို IL အမေရိကန်မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံဆရာ Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, Inc $ 500 တစ်နေ့ - စာချုပ် - Chicagoland ဧရိယာအသည်းအသန်နေသောဖန်တီးမှုတစ်ဦးချင်းစီမှအလွတ်တန်းရာထူးတစ်ခုကိုရွေးပါငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းသည် ဓာတ်ပုံအကြောင်းကို client-oriented ရာထူးအတွက်ခံစားခဲ့ရသညျ။ ဓာတ်ပုံဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးအသင်းကို Join ။ ကျနော်တို့က high-quality ထံအပ်နှံကြသည် ...
မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် - အီလီနွိုက်
ရာထူး: မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် - အီလီနွိုက်ကုမ္ပဏီ: Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံ, Inc တည်နေရာ: ချီကာဂို IL အမေရိကန်မင်္ဂလာဆောင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် Eivan ရဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို, Inc $ 500 တစ်နေ့ - စာချုပ် - Chicagoland ဧရိယာ Eivan ရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ဦးချင်းစီမှအလွတ်တန်းရာထူးတစ်ခုကိုရွေးပါငွေပမာဏကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်သူသည် ဗီဒီယိုများနှင့် oriented client ကိုအတွက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရာထူးအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ကြသည်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးအသင်းကို Join ။ ကျနော်တို့အပျနှံနေကြတယ် ...
- မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Tech မှ
ရာထူး: - မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Tech မှကုမ္ပဏီ: ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတည်နေရာ၏စီးတီး & ကောင်တီ: ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA အမေရိကန်နိဒါန်း 1766 - မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Tech မှရဲအကယ်ဒမီဒီမြို့ပြဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်နည်းဥပဒေ 111A နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားအခြေခံပြီးစမ်းသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ WHO ကငါတို့: အဆိုပါ San Francisco ကရဲဌာနဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ထူးချွန်ဖို့ကျူးလွန်နေသည်နှင့်ရန်အပ်နှံသည် ...
အကြောင်းအရာ Manager ကို
ရာထူး: အကြောင်းအရာ Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Stonyfield လယ်ယာတည်နေရာ: Londonderry နယူးဟမ်းရှားအမေရိကန် POSITION ခြုံငုံသုံးသပ်ရန်: Stonyfield တက်ကြွ moms နှင့်သတိစားသုံးသူ၎င်း၏ပြောင်းလဲနေသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုထက်ပိုသောပညာရေးနှင့်အပြန်အလှန်အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံဆီသို့အသစ်တစ်ခုလမ်းကြောင်းကိုကူးပြောင်းနေရာအဖြစ်ကျနော်တို့သူအတွေ့အကြုံရှိအယ်ဒီတာ Maverick ရှာကြံနေ လာမယ့်အဆင့်အထိကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာ Manager ကိုအားလုံးစားသုံးသူများအတွက်တာဝန်ရှိသည် ...